ATI chipset Graphic driver ​သ​မား​များ​အ​တွက် ​မ​ရှိ​မ​ဖြစ် Graphic Driver ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
ATI chipset Graphic driver ​သ​မား​များ​အ​တွက် ​မ​ရှိ​မ​ဖြစ် Graphic Driver
​ဘာ graphic ​အ​မျိုး​အ​စား​တွေ​ရ​လဲ ​ကို​ညီ​နေ​မင်း ​လို့​မေး​ရင်​တော့ ​အောက်​မှာ ​ဖော်​ပြ​ထား​တဲ့ Graphic card ​အ​မျိုး​အ​စား​အား​လုံး​ကို support ​လုပ်​ပါ​တယ်​လို့​ပဲ ​ဖြေ​ရ​မှာ​ပါ​ပဲ. ​အဲ့​တော့ ​ကို​ဝယ်​ထား​တဲ့ graphic card ​အ​မျိုး​အ​စား​ဟာ ​အောက်​က ​ဖော်​ပြ​ထား​တဲ့​အ​ထဲ​မှာ ​ပါ​သ​လား ​ကြည့်​လိုက်​ပါ. ​မိ​မိ​မှာ Graphic driver ​မ​ရှိ​ဘူး​ဆို​ရင်​တော့ download ​လုပ်​ရ​မှာ ​သေ​ချာ ​သ​လောက်​ပါ​ပဲ. ​ဘာ​လို့​လဲ​ဆို​ရင် ​တစ်​ချို့ ​ကွန်​ပျူ​တာ​ဆိုင်​တွေ​က ​ကွန်​ပျူ​တာ ​သာ​ရောင်း​ပေး​လိုက်​တာ driver ​ခွေ​တွေ​ကျ​တော့ ​မ​ထည့်​ပေး​တတ်​ကြ​ပါ​ဘူး. ​ထိုင်း​နိုင်​ငံ​မှာ​အ​ဆိုး​ဆုံး​ပါ​ပဲ. ​ဘာ​လို့​လဲ​ဆို​ရင် service ​ကို ​သ​တို့​ဆိုင်​မှာ​ပဲ ​လာ​လုပ်​စေ​ချင်​တဲ့ ​သ​ဘော​ပါ​ပဲ. ​ကဲ​လို​အပ်​ရင်​တော့ ​အောက်​မှာ Download ​လုပ်​လိုက်​ပါ. game ​ဆော့​တာ​ပဲ​ဖြစ်​ဖြစ်၊ video edit ​လုပ်​တာ​ပဲ​ဖြစ်​ဖြစ်၊ audio edit ​လုပ်​တာ​ပဲ​ဖြစ်​ဖြစ်၊ ​ဓါတ်​ပုံ​ပြင်​တာ​ပဲ​ဖြစ်​ဖြစ် Graphic card ​ဟာ​လည်း ​အ​ရေး​ကြီး​တဲ့ ​အ​ခန်း​က​ဏ္ဍ​မှာ​ပါ​ဝင်​ပါ​တယ်. ​အ​ဆင်​ပြေ​မယ်​လို့ ​မျှော်​လင့်​ပါ​တယ်.
Support ​လုပ်​သော Graphic(ATI Chipset) ​အ​မျိုး​အ​စား​များ
ATI Radeon HD 6900HD 6800, HD 6310, HD 6300M, HD 6250
ATI Radeon HD 4890, HD 4870 X2, HD 4850 X2, HD 4800,
ATI Radeon HD 4700, HD 4670, HD 4650, HD 4600, HD 4550, HD 4350.
​ကဲ Download ​လုပ်​ထား​သင့်​တယ် ​လုပ်​မ​ထား​သင့်​ဘူး ​ဆို​တာ​က​တော့ ​ကိုယ့်​ဟာ​ကို​သာ ​ဆုံး​ဖြတ်​ကြ​ပါ. ​လို​အပ်​တဲ့​သူ​များ ​အောက်​မှာ ​တင်​ပေး​ထား​ပါ​တယ်. ​အ​ပိုင်း​တွေ​ခွဲ​ပြီး​တင်​ပေး​ထား​ပါ​တယ်. ​အ​ပိုင်း​အား​လုံး​ကို download ​လုပ်​ရ​မှာ​ပါ. ifile ​က​နေ download ​လုပ်​လုပ်၊ mediafire ​က​နေ​ပဲ​လုပ်​လုပ်၊ minus ​က​နေ​ပဲ​လုပ်​လုပ် ​ဘယ်​က​နေ ​လုပ်​လုပ် ​တင်​ထား​တဲ့ ​ဖိုင်​စုံ​နေ​ဖို့​အ​ရေး​ကြီး​ပါ​တယ်. Part1 | Part2 | Part3 ​အဲ့​လို​သုံး​ပိုင်း​တင်​ထား​ရင် ​သုံး​ပိုင်း​စ​လုံး​ဒေါင်း part1 ​ကို ifile ​က​နေ​ဒေါင်း​ပြီး part2 ​ကို mediafire ​က​နေ ​ဒေါင်း​မယ်၊ ​ပြီး​တော့ Part3 ​ကို minus ​က​နေ ​ဒေါင်း​မယ် ​ဒါ​လဲ​ရ​တာ​ပဲ. ​အ​ဓိ​က​က ​ဘယ်​က​နေ ​ဒေါင်း​ဒေါင်း Part1 | Part2 | Part3 (၃)​ဖိုင်​ခွဲ​ပြီး​တင်​ထား​တယ်​ဆို​ရင် (၃)​ဖိုင်​စုံ​မှ​သာ ​ဖိုင်​ဖြေ​တဲ့​အ​ခါ​မှာ ​တင်​ပေး​ထား​တဲ့​ဖိုင်​ကို ​ပြည့်​ပြည့်​စုံ​စုံ​ရ​ရှိ​မှာ​ဖြစ်​ပါ​တယ်. ​တစ်​ပိုင်း​လို​နေ​ရင်​လည်း error ​ပြ​မှာ​ပါ​ပဲ. ​ဒီ​လောက်​ပြော​ပြ​ရင် ​သ​ဘော​ပေါက်​မယ်​လို့ ​မျှော်​လင့်​ပါ​တယ်. ​ပြော​ပြ​နေ​တာ ​အ​ကြောင်း​ရှိ​လို့​ပါ. ​တစ်​ချို့​က ​တစ်​ပိုင်း​တည်း​ဒေါင်း​ပြီး error ​ဖြစ်​နေ​တယ် ​ဘာ​ဖြစ်​လို့​လဲ၊ ​ဘာ​လို့ software ​မ​ဟုတ်​ဘဲ ​တင်​တာ​လဲ ​စ​သ​ဖြင့် ​အ​ပြစ်​တင်​ကြ​ပါ​တယ်. ​အဲ့​တော့ ​ပေါ်​လာ​တဲ့ error ​စာ​သား​ကို ​အ​ရင်​ဖတ်​ပါ. definition ​မ​သိ​ရင် Http://www.ayar.co ​မှာ ​သွား​ပြီး​တော့ translate ​လုပ်​လိုက်​ပါ. dictionary ​တွေ​လည်း ​တင်​ပေး​ထား​တာ ​အ​များ​ကြီး​ပါ​ပဲ. ​ကဲ​အောက်​မှာ download ​လုပ်​လိုက်​ကြ​ပါ​ဦး.
win May 31, 2012 at 8:10 AM
​ဒေါင်း​သွား​ပြီ ​ကို ​ညီ ​ကျေး​ဇူး​ပါ​ပဲ။ ​လို​နေ​တာ​နဲ့ ​အ​တော်​ပဲ​ဗျာ ​ကျေး​ဇူး​အ​ရမ်း​တင်​ပါ​တယ်။
Yaw Min Ko February 14, 2014 at 4:35 PM
​ဒီ​ဟာ​လေး ​အ​ခု​မှေ​တွ့​လို့ down ​နေ​ပါ​တယ်​ခင်​ဗျ ​စမ်း​ကြည့်​လိုက်​ပါ့​ဦး​မယ် ​ခင်​ဗျ ​ကျေး​ဇူး​ပါ :)
Yaw Min Ko March 9, 2014 at 3:00 AM
​အ​ကို ​အ​ပိုင်း၃​နဲ့ ၆ ​က​ဒေါင်း​မ​ရ​ဘူး​ဖစ်​နေ​တယ်​ခင်​ဗျ ​ဘယ်​လို​လုပ်​က​မ​လဲ​ဗျ ​ကျန်​တာ​တွေ​တော့​ရ​ပါ​ပီ​ခင်​ဗျ ​ကူ​ညီ​ပါ​ဦး​ခင်​ဗျ
Desktop icon ​ပြောင်း​တဲ့ XUS desktop v1.8.77
Mavis Beacon Teaches Typing Platinum 20 (​အ​ကောင့်...
Aspire 3830T Drivers For Window7Ultimate (x64 bi...
ATI chipset Graphic driver ​သ​မား​များ​အ​တွက် ​မ​ရ...
Iso ​နှင့် Bin format ​တွေ​အ​တွက် WinISO Standard ...
Aurora 3D Presentation 2012 (​နောက်​ဆုံး​ထွက်) (77...
IMTOO Photo to flash converter version1.10 ​ပါ